Virtual Office Washington - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
Washington ရှိ USA ရှိ Virtual Office
တတ်နိုင် Virtual ရုံး in ဝါရှင်တန် - အမေရိကန် သင့်ရဲ့အဘို့ virtual ရုံးလိပ်စာ ဝါရှင်တန်တွင်အမေရိကန် - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကို virtual လိပ်စာ ဝါရှင်တန် - အမေရိကန်, virtual ရုံးခန်း ဝါရှင်တန် - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, အွန်လိုင်းရုံး ဝါရှင်တန် - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု, virtual စီးပွားရေးလိပ်စာ ဝါရှင်တန်တွင်ဝါရှင်တန်ရှိ virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည် ကို virtual ရုံးဝန်ဆောင်မှုပေး US မှာ။
Virtual ရုံး ယူအက်စ် | Virtual ရုံးလိပ်စာ ယူအက်စ် | စီးပွားရေးအတွက်စကားဝှက်လိပ်စာ ယူအက်စ် | Virtual ရုံးခန်း ယူအက်စ် | အွန်လိုင်း Virtual ရုံး ယူအက်စ် | virtual စီးပွားရေးလိပ်စာ ယူအက်စ် | Virtual Workspace US မှာ။
အဘယ်ကြောင့်ဝါရှင်တန်ရှိ virtual ရုံးလိပ်စာရှိရမည်?
၀ ါရှင်တန်တွင်ကြီးထွားလာသောစီးပွားရေးရှိပြီးစီးပွားရေးနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအလုပ်များရာခိုင်နှုန်းသိသိသာသာတိုးပွားလာသည်။ ဥပဒေကြောင်းဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများ၊ ကာကွယ်ရေးကန်ထရိုက်တာများ၊ အရပ်ဘက်ကန်ထရိုက်တာများ၊ အမြတ်အစွန်းမယူသောအဖွဲ့အစည်းများစသည့်အဖွဲ့အစည်းများသည် ၀ ါရှင်တန်တွင်ရှိသောသို့မဟုတ်အနီးအနားရှိဌာနချုပ်များထားရှိကြသည်။ DC Virtual ရုံးများသည်သင့်လိုအပ်ချက်များကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်သင့်လျော်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Virtual Office များသည်မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဆိုအကျိုးကျေးဇူးများစွာဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်သည်။ ၀ ါရှင်တန်သည်စျေးကြီးသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သော်လည်းသင်၌စီးပွားရေးရှိပါက၊ DC ရှိ virtual ရုံးသည်ငွေအမြောက်အများမဖြုန်းဘဲသင်၏အခြေခံစီးပွားရေးလိုအပ်ချက်များကိုဂရုပြုရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ သင်၏ Virtual Office သည်သင်၏စာပို့လိပ်စာဖြစ်လိမ့်မည်။ မကြာခဏစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်မြို့တော်သို့မကြာခဏလာရောက်လည်ပတ်သူများသည် DC ရှိ virtual ရုံးသည်အလွန်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်နေရာ၌မဆို Virtual Office ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့သင်၏စီးပွားရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်။ သို့သော်ဝါရှင်တန်ဒီစီကဲ့သို့သောမြို့တစ်မြို့တွင်၎င်းတို့သည်အထူးအကျိုးရှိပြီးအဆင်ပြေနိုင်သည်။
၀ ါရှင်တန်တွင်ရုံးခန်းဖွင့်ထားခြင်းသည် ၀ ါရှင်တန်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၀ ါရှင်တန်ရှိ virtual ရုံးသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအားငှားရမ်းခြင်းနှင့်နေရာတစ်ခုတွင်ငှားရမ်းခြင်းမပြုရန်အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးသည်။ ၀ ါရှင်တန်ရှိ Virtual Office သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး ၀ ါရှင်တန်ရှိသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အများစုသည် ၀ ါရှင်တန်ရှိဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့်စီးပွားရေးလိပ်စာကိုသင်ငှားရမ်းခများမပေးဘဲ ၀ ါရှင်တန်တွင် virtual office တစ်ခုကိုရွေးချယ်ကြသည်။ Virtual Office Washington သည်သင့်အားစီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုအနိမ့်ကျသက်သာစေနိုင်သည်။ Virtual ရုံးနေရာကို ၀ ါရှင်တန်ကို ၀ ါရှင်တန်တွင် virtual office အဖြစ်ယူခြင်းအားဖြင့်သင်ဟာပိုကြီးတဲ့ရုံးခန်းကိုပြောင်းစရာမလိုဘဲဝါရှင်တန်ရှိသင်၏စီးပွားရေးကိုချဲ့ထွင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ Washington Virtual ရုံးသည် ၀ ါရှင်တန်ရှိရိုးရာစီးပွားရေးတိုးချဲ့မှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောအခြားနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သင်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးလာလိမ့်မည်ဟုသေချာစေနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်၊ ၀ ါရှင်တန်တွင် virtual office လိပ်စာရှိသည့်အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာသင်၏ package နှင့်စာတိုက်တို့ကို ၀ ါရှင်တန်ရှိမည်သည့်နေရာကိုမျှမသွားဘဲ ၀ ါရှင်တန်ရှိ virtual ရုံးများ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ပါ။ ၀ ါရှင်တန်တွင် virtual office တစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းသည်အဝေးမှအလုပ်လုပ်လိုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၀ ါရှင်တန်၏ virtual office သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုသင်အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုပေးသည်။
အမေရိကန်၊ ၀ ါရှင်တန်ရှိ virtual စီးပွားရေးလိပ်စာကဘာကိုကမ်းလှမ်းသနည်း။
တစ်ဦးရှိခြင်းသည် ဝါရှင်တန်ရှိ virtual ရုံး ၀ ါရှင်တန်ရှိစီးပွားရေးအတွက်စီးပွားရေးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ၀ ါရှင်တန်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိပ်စာအဖြစ်လူသိများသော ၀ ါရှင်တန်ရှိ virtual ရုံးသည်ငှားရမ်းခြင်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်သို့မဟုတ်တည်နေရာအတွက်စျေးကြီးသောငှားခကိုမပေးဆောင်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည်။ ၀ ါရှင်တန်ရှိ Virtual Office သည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး ၀ ါရှင်တန်တွင်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးသည်။ ထို့အပြင် ၀ ါရှင်တန်ရှိ virtual ရုံးသည် ၀ ါရှင်တန်ရှိရိုးရာရုံးခန်းထက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များစွာသည် ၀ ါရှင်တန်ရှိဂုဏ်သိက္ခာရှိသည့်စီးပွားရေးလိပ်စာကိုသင်ငှားရမ်းခပေးဆောင်စရာမလိုဘဲ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည့်အတွက်အမေရိကန်သို့ virtual office ကိုရွေးချယ်ကြသည်။ Virtual Office Washington သည်သင့်အားစီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုအနိမ့်ကျသက်သာစေနိုင်သည်။ Virtual ရုံးနေရာကို ၀ ါရှင်တန်ကို ၀ ါရှင်တန်တွင် virtual office အဖြစ်ယူခြင်းအားဖြင့်သင်ဟာပိုကြီးတဲ့ရုံးခန်းကိုပြောင်းစရာမလိုဘဲဝါရှင်တန်ရှိသင်၏စီးပွားရေးကိုချဲ့ထွင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ Washington Virtual ရုံးသည် ၀ ါရှင်တန်ရှိရိုးရာစီးပွားရေးတိုးချဲ့မှုနှင့်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောအခြားနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သင်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးလာလိမ့်မည်ဟုသေချာစေနိုင်ပါတယ်။ ၀ ါရှင်တန်ရှိ virtual office လိပ်စာရှိခြင်းသည်အရေးအကြီးဆုံးအရာမှာသင် ၀ ါရှင်တန်ရှိသင်၏ရုံးနေရာသို့မဟုတ်ဝါရှင်တန်ရှိ Workspace တွင်ရရှိခဲ့သည့်အတိုင်းသင်ရရှိနိုင်သည်၊ ၀ ါရှင်တန်ရှိ Workspace သို့မဟုတ် ၀ ါရှင်တန်ရှိရုံးခန်းသည်သင်၏အစီအစဉ်များကိုရရှိသည်။ ၀ ါရှင်တန်ရှိစာတိုက်မေးလ်များ၊ ဘယ်နေရာကိုမှပြောင်းရွှေ့စရာမလိုဘဲ၊ သင်၏အွန်လိုင်း US အတွက်သင်၏ရုံးခန်းနှင့် ၀ ါရှင်တန်တွင်လူအများအပြားတို့သည် virtual office လိုအပ်သည်။ ၀ ါရှင်တန်တွင် virtual office တစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းသည်အဝေးမှအလုပ်လုပ်လိုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၀ ါရှင်တန်၏ virtual office သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုသင်အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုပေးသည်။
၀ ါရှင်တန်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ Virtual Offices တွေကသင့်အားနောက်ထပ်အားသာချက်များအနည်းငယ်ပေးသည်။
၀ ါရှင်တန်ရှိသင်၏ Virtual Office လိပ်စာသည်ဖောက်သည်များအပေါ်တည်မြဲသောစွဲမှတ်မှုဖြစ်စေမည့်အကျိုးရှိသည့်နေရာတွင်ဖြစ်သည်။
၀ ါရှင်တန်ရှိ virtual စီးပွားရေးလိပ်စာကိုကုန်ကျစရိတ်ကြီးကြီးမားမားနှင့်စာရွက်စာတမ်းများမလိုအပ်ဘဲသင်၏စီးပွားရေးအခြေအနေအသစ်ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
သင်၏ Virtual Office ၏အဓိကအကျိုးကျေးဇူးများ ဝါရှင်တန်, အမေရိက၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌တည်၏
ဝါရှင်တန်အတွက် Cloud Storage
Virtual Office အတွက် ၀ ါရှင်တန်၊
ဝါရှင်တန်တွင်ပစ္စည်း (၂၀) ​​အထိလက်ခံရရှိသည်
ဝါရှင်တန်တွင်စာအိတ် ၁၀ စောင်အတွက်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်မလိုပါ
၀ ါရှင်တန်တွင်ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာသုံးမျိုးကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်အတွက်အခကြေးငွေမပေးပါ
ဝါရှင်တန်ရှိစာတိုက်မေးလ်သိုလှောင်ခန်းကိုရက် ၂၀ အထိအခမဲ့ဖြစ်သည်
ဝါရှင်တန်တွင် ၁၀ ရက်အထိအခမဲ့ချောထုပ်သိုလှောင်ခြင်း
US ရှိ Virtual ရုံးနေရာအတွက်ဝါရှင်တန်ရှိသင်၏ Virtual ရုံး၏တည်နေရာ
အရှေ့မြောက်ဘက် ၁၃၄၅ H လမ်း၊
၀ ါရှင်တန်ရှိ Virtual Office အကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ
Virtual ရုံးအတွက်အသုံးပြုခပိုယူသည် ဝါရှင်တန် - ယူအက်စ်အေ
ဝါရှင်တန်ရှိ virtual စီးပွားရေးလိပ်စာနှင့်အခြားတည်နေရာများ -
ရယူ ဝါရှင်တန်ရှိ virtual ရုံးအပေါငျးတို့သမရှိမဖြစ်သာယာအဆင်ပြေမှုများ စျေးသက်သာစျေးနှုန်းမှာ
ကန့်သတ် ၀ ါရှင်တန်၊ အမေရိကန်အတွက် virtual office အသုံးပြုမှုအကြောင်း။
၀ ါရှင်တန်၊ အမေရိကန်အတွက် Virtual Office ၀ န်ဆောင်မှုကိုဝါရှင်တန်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ။
၀ ါရှင်တန်၊ အမေရိကန်အတွက် virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုများအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ကုန်သည်များ၊ ဖြန့်ဖြူးသူများသို့မဟုတ်လက်နက်များ၊ လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ၊
အမေရိကန်၊ ၀ ါရှင်တန်ရှိ virtual office များမှ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုထိန်းချုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းမှသို့မဟုတ်အမေရိကန်သို့၎င်း၊
၀ ါရှင်တန်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက် virtual address service အောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအမေရိကန်ဥပဒေ၏အနက်ရောင်စာရင်းဝင်သည့်တရားမဝင်သို့မဟုတ်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တစ်ယောက်အားပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
၀ ါရှင်တန်၊ အမေရိကန်အတွက် virtual office လိပ်စာအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုအမေရိကန်သို့မဟုတ်အမေရိကန်မှဖြစ်စေ၊
၀ ါရှင်တန်၊ အမေရိကန်အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်လုပ်ငန်းခွင် ၀ န်ဆောင်မှုအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည် ၀ ါရှင်တန်အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ် Workspace ဖြေရှင်းချက်အောက်ရှိအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အန္တရာယ်ရှိသောဇီဝဗေဒ၊ ဓာတုပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းမဟုတ်ပါ၊ အမေရိကန်သည်နျူကလီးယားပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်သို့မဟုတ်စွန့်ပစ်ရန်အသုံးပြုသည့်စက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်၊
၀ ါရှင်တန်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက် virtual po box ဝန်ဆောင်မှုအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်လူသားများနှင့်တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မည်သည့်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအတွက်မဆိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှသို့မဟုတ်သို့မဟုတ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ထားခြင်းမရှိပါ။
၀ ါရှင်တန်နှင့်အမေရိကန်အတွက် virtual mailing address service အောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မွေးစားမိဘများလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသို့မဟုတ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းမှသို့မဟုတ်အမေရိကန်သို့ဖြစ်စေ၊
၀ ါရှင်တန်၊ အမေရိကန်အတွက်ရုံးခန်းငှားရမ်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဘာသာရေးအစွန်းရောက်များနှင့်အမေရိကန်မှဖြစ်စေ၊
၀ ါရှင်တန်၊ ယူအက်စ်အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်စီးပွားရေးလိပ်စာများအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအခြေခံသောအမေရိကန်နိုင်ငံရှိပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
၀ ါရှင်တန်၊ အမေရိကန်အတွက်အကောင်းဆုံး virtual address service အောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည် Pyramid အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ကိုင်နေသောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှသို့မဟုတ်အမေရိကန်သို့တစ် ဦး ချင်းစီသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
၀ ါရှင်တန်၊ အမေရိကန်အတွက်ရုံးခန်းငှားရမ်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများအောက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းလုပ်ငန်းတွင်လုပ်ကိုင်နေသောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းမှဖြစ်စေ၊
အမေရိကန်၌သင်၏ virtual office ကိုယနေ့စျေးနှုန်းသက်သာစွာဖြင့်ရယူပါ။
virtual address ကိုအသုံးပြုခြင်းအပေါ်အရေးကြီးသောမှတ်စု အမေရိက၏ဝါရှင်တန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌တည်၏
virtual ရုံးမှန်ဆောင်မှုများ အမေရိက၏ဝါရှင်တန်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌တည်၏
ကျနော်တို့စျေးသက်သာ ကို virtual ရုံးန်ဆောင်မှုများ in Washingtonအဖြစ်ကိုလည်းသိ ကို virtual စာတိုက်ပုံးန်ဆောင်မှုများ ဝါရှင်တန် (အမေရိကန်), virtual လိပ်စာဝန်ဆောင်မှု ဝါရှင်တန်မှာ virtual ရုံးကုမ္ပဏီ ဝါရှင်တန် (အမေရိကန်), စာပို့ဝန်ဆောင်မှု ဝါရှင်တန်မှာ ကို virtual ရုံးလိပ်စာဝန်ဆောင်မှု ဝါရှင်တန်မှာ ဒီဂျစ်တယ် Workspace န်ဆောင်မှု ဝါရှင်တန်မှာ စာတိုက်လိပ်စာဝန်ဆောင်မှု ဝါရှင်တန်မှာ virtual ရုံးကုမ္ပဏီများသည် ဝါရှင်တန်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ဒီဂျစ်တယ် workspace ဖြေရှင်းချက် ဝါရှင်တန် ကို virtual po box ကိုဝန်ဆောင်မှု ဝါရှင်တန် ကို virtual mailing address ကိုဝန်ဆောင်မှု ဝါရှင်တန် virtual ရုံးငှားရမ်းန်ဆောင်မှု ဝါရှင်တန် ကို virtual ရုံးခန်းငှားရမ်းန်ဆောင်မှု ဝါရှင်တန်၊ ဒီဟာငါတို့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းပဲ ကို virtual ရုံးန်ဆောင်မှုများ in US, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း, ကို virtual စာတိုက်ပုံးန်ဆောင်မှုများ ယူအက်စ်တွင် virtual လိပ်စာဝန်ဆောင်မှု ယူအက်စ်တွင် ကို virtual ရုံးလိပ်စာဝန်ဆောင်မှု ယူအက်စ်တွင် စာပို့ဝန်ဆောင်မှု ယူအက်စ်တွင် ဒီဂျစ်တယ် Workspace န်ဆောင်မှု အမေရိကန်၌, ငါတို့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ် ဒီဂျစ်တယ် workspace ဖြေရှင်းချက် ယူအက်စ်တွင် စာတိုက်လိပ်စာဝန်ဆောင်မှု ယူအက်စ်တွင် ကို virtual PO box ကိုဝန်ဆောင်မှု ယူအက်စ်တွင် ကို virtual mailing address ကိုဝန်ဆောင်မှု ယူအက်စ်တွင် virtual ရုံးကုမ္ပဏီ ယူအက်စ်တွင် virtual ရုံးငှားရမ်းန်ဆောင်မှု ယူအက်စ်တွင် virtual ရုံးကုမ္ပဏီများသည် ယူအက်စ်တွင် ကို virtual ရုံးခန်းငှားရမ်းန်ဆောင်မှု US မှာ။ အဖြစ် ကို virtual ရုံးဝန်ဆောင်မှုပေး ဝါရှင်တန်ရှိ
Virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ ယူအက်စ် | Virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ ဝါရှင်တန်ရှိ
ပို၍ ထူးခြားသည် ဝါရှင်တန်ရှိအမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြေရှင်းနည်းများ
၀ ါရှင်တန်ရှိဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းသည် ၀ ါရှင်တန်ရှိသင်၏စီးပွားရေးတိုးချဲ့မှုအတွက်အောင်မြင်မှုအတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ ၀ ါရှင်တန်၏စျေးကွက်များသို့ရောက်ရှိရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းမှာ ၀ ါရှင်တန်၏အခွန်နှုန်းထားကိုအခွင့်ကောင်းယူရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝါရှင်တန်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ၀ ါရှင်တန်တွင်တင်သွင်း - တင်ပို့ခြင်း၊ ၀ ါရှင်တန်သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်း၊ ၀ ါရှင်တန်ရှိအိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်း၊ ၀ ါရှင်တန်ရှိထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်နှင့် ၀ ါရှင်တန်ရှိ HR အတိုင်ပင်ခံတို့၏ကျွမ်းကျင်သောအဖွဲ့၏အကူအညီဖြင့် ၀ ါရှင်တန်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်း။
၀ ါရှင်တန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြုနှင့်ဝါရှင်တန်အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များစုံလင်ခြင်းနှင့် ၀ ါရှင်တန်အတွက်အကောင်းဆုံးပြိုင်ဆိုင်မှုရှိသောစျေးနှုန်းများဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအတွက်ကောင်းမွန်သောအဖြေများပေးရာ၌ဝါရှင်တန်အတွက်မိတ်ဖက်များနှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိခြင်း
ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကုမ္ပဏီ ဝါရှင်တန်, United States မှာ
NetherLands နှင့် US အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံတွင်ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကုမ္ပဏီ၏အထောက်အပံ့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းထားသည်။ ထို့အပြင်တစ် ဦး အဖြစ်လူသိများဝါရှင်တန်ရှိတစ် ဦး ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကော်ပိုရေးရှင်း စင်ပေါ်ကုမ္ပဏီ ဝါရှင်တန်ရှိအသက်ကော်ပိုရေးရှင်းဝါရှင်တန်တွင်ဝါရှင်တန်တွင်တည်ထောင်ပြီးဝါရှင်တန်တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာအိုမင်းခြင်းအတွက်“ စင်ပေါ်တင်ထားသည့်” ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ (နိုင်ငံတကာအလေ့အကျင့်) ။ စီးပွားရေးမရှိ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုလည်းမရှိပါ။
၀ ါရှင်တန်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်ပထမခြေလှမ်းသည် ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဝါရှင်တန်တွင်ဖြစ်စဉ်ကိုဖော်ပြသည့်အသုံးအနှုန်းဖြစ်သည် သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဝါရှင်တန်ရှိ ပထမ ဦး စွာ ကုမ္ပဏီ၏အမည်ရရှိနိုင်မှု ဝါရှင်တန်ရှိစစ်ဆေးပြီးသည်နှင့်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ သင်၏လုပ်ငန်းကိုစတင်ပါ ဝါရှင်တန်ရှိလုပ်ငန်းများ၌နေကြသည်။ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဝါရှင်တန်ရှိတစ် ဦး လွယ်ကူသောဖြစ်စဉ်ကိုပါ!
ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ပါ ဝါရှင်တန်, အမေရိက၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌တည်၏
ပြီးနောက် ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် ဝါရှင်တန်မှာ စီးပွားရေးဘဏ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်း ၀ ါရှင်တန်တွင် ၀ ါရှင်တန်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်သောအခါလုပ်ရမည့်အရေးအကြီးဆုံးအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးဘဏ်အကောင့် ဝါရှင်တန်ရှိသင်၏အဘို့အဓိကအခန်းကဏ္ role မှပါဝင်သည် startup စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဝါရှင်တန်ရှိစီးပွားရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုစာရင်းပြုစုရန်ဝါရှင်တန်ရှိဝါရှင်တန်ရှိအခွန်အစီရင်ခံခြင်းနှင့်ဝါရှင်တန်ရှိသင်၏ကုမ္ပဏီအောက်တွင်ငွေသွင်းခြင်းများကိုရိုးရှင်းစေသည်။
ဝါရှင်တန်မှ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအတွက်သင်ရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဝါရှင်တန်မှတိုးတက်မှု ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင် ဝါရှင်တန်အပြင်ဘက်မှာမင်းရဲ့အဖြေက ၀ ါရှင်တန်အပြင်ဘက်ကိုတောင်ပံတွေပျံ့နှံ့သွားစေနိုင်တယ်။ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ ဝါရှင်တန်ရှိလွတ်လပ်မှုကိုသင့်ကိုပေးနိုင်သည် သင်၏နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကိုစတင်ပါ ဝါရှင်တန်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှဖြစ်သည်။
ဖွင့်လှစ် ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့် ဝါရှင်တန်ကနေ
သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် သင်၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစလုပ်ပါ ဝါရှင်တန်ရှိနှင့်အဘို့ရှာကြသည် ကမ်းလွန်ဘဏ်၎င်းကိုဖွင့်ရန်လွယ်ကူသည် ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့် ဝါရှင်တန်ကနေ။ ၀ ါရှင်တန်တွင်စာရွက်စာတမ်းများဖြည့်စွက်ခြင်း၊ ၀ ါရှင်တန်ရှိအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် ၀ ါရှင်တန်တွင်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းဖြင့်သင်သည် ၀ ါရှင်တန်မှတရားမဝင်လုပ်ဆောင်မှုများကိုစီစဉ်နေခြင်းမဟုတ်ကြောင်းပြသရန်ဖြစ်သည်။
ကုန်သည်အကောင့် ဝါရှင်တန်နှင့် ငွေပေးချေမှုရမည့် Gateway မှာ ဝါရှင်တန်အဘို့
eCommerce ငွေပေးချေမှုဖြေရှင်းချက် ဝါရှင်တန်အတွက်, All-In-One ငွေပေးချေမှုပလက်ဖောင်း ဝါရှင်တန်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ငွေပေးချေရန်တံခါးပေါက် နှင့် ကုန်သည်အကောင့် ဝါရှင်တန်ရှိ startup စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ရှုပ်ထွေးထင်ရစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး။ ဝါရှင်တန်အတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ ၀ ါရှင်တန်အတွက်ငွေပေးချေသည့်စနစ်နှင့်ကုန်သည်အကောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ် ဝါရှင်တန်မှာ - သင်တစ် ဦး လျှင် eCommerce ကုန်သည် ဝါရှင်တန်ရှိ
ကျော်များအတွက်ဝါရှင်တန်ရှိငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက် 170 နိုင်ငံများ
ဝါရှင်တန်ရှိကုန်သည်အကောင့် - ငွေကြေး ၂၀၀ လက်ခံပါ
ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံပါ ထက်ပိုမိုထံမှဝါရှင်တန်ရှိ 300 ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများ
ရောင်းရန်ရှိသောစီးပွားရေး ဝါရှင်တန်, United States မှာ
ရှိပြီးသားစီးပွားရေးကိုဝယ်ပါ ဝါရှင်တန်ရှိ သင်၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုစတင်ပါ Washington.To ၌တည်၏ စီးပွားရေးစတင်ပါ ၀ ါရှင်တန်တွင်ဝါရှင်တန်ရှိလက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ၀ ယ်ယူခြင်းကိုလည်းစဉ်းစားနိုင်သည်။
စီးပွားရေးရောင်းအား ဝါရှင်တန်တွင်ဖြစ်ပျက်သည်မှာလူတစ် ဦး သည်ဝါရှင်တန်ရှိကုမ္ပဏီရှယ်ယာများကိုဝယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ်ဝါရှင်တန်ရှိကုမ္ပဏီ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
သငျ့လျြောသော ကြောင့်လုံ့လဝီရိယ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမရောင်းချခင်လုပ်ဆောင်ရပါမည်။ ပါတီများက ၀ င်ရောက်ခြင်း၏အကျိုးဆက်များကိုသတိပြုရမည် စီးပွားရေးရောင်းချခြင်း ဝါရှင်တန်နှင့်နောက်ကွယ်မှဥပဒေရေးရာသက်ရောက်မှုတွေအတွက်။
အကောင့်များ Outsourcing ဝါရှင်တန်ရှိ
အကောင့်များ outsourcing ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များနှင့်လိုအပ်ချက်များအတွက်ဝါရှင်တန်ရှိကွဲပြားခြားနားသောစက်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သည်။ ၀ ါရှင်တန်တွင်ပြုလုပ်သောငွေစာရင်းများက ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့် ၀ န်ဆောင်မှုသည် ၀ ါရှင်တန်ရှိဘဏ္indicatorsာရေးညွန်းကိန်းများကိုဖော်ထုတ်ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။
- စာရင်းကိုင်ဝန်ဆောင်မှု ဝါရှင်တန်ရှိ
ဝါရှင်တန်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဝါရှင်တန်ရှိထူထောင်ထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ဖြစ်လျှင်ဝါရှင်တန်မှအီးယူအတွက်ဘဏ္financialာရေးလိုင်စင်ရယူခြင်းသို့မဟုတ်ဝါရှင်တန်မှဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင်အတွက်ကမ်းလွန်လိုင်စင်၊ Crypto လဲလှယ်ခြင်းနှင့် ICO လိုင်စင်သို့မဟုတ် ၀ ါရှင်တန်မှလောင်းကစားလုပ်ငန်းလိုင်စင်အတွက်အကူအညီလိုအပ်လျှင်လိုအပ်သည်။
Virtual Number (VoIP) ဝါရှင်တန်, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအဘို့
VoIP ကမ်းလှမ်းသောဝန်ဆောင်မှုများ ဘို့ နှစ်ခုလုံး စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဝါရှင်တန်နှင့်လူနေအိမ် VoIP ၌တည်၏။
Virtual နံပါတ် ဝါရှင်တန်အတွက် 89 နိုင်ငံများ | 290 အမြို့မြို့
လိုဂိုဒီဇိုင်း ဝါရှင်တန်, United States မှာ
၀ ါရှင်တန်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီဇိုင်းနာများဖန်တီးသော ၀ ါရှင်တန်တွင်အောင်မြင်မှုအတွက်ထူးခြားသောကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ၊
၀ ါရှင်တန်ရှိသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်စေ၊ အခြားမည်သည့်နေရာ၌ဖြစ်စေ၊ သင့်လုပ်ငန်းအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကောင်း ဝါရှင်တန် (သို့) တခြားနေရာမှာ၊ မင်းရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ရှိနေခြင်းပျောက်နေတယ်။
ယူအက်စ်တွင်စျေးသက်သာသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်း
၀ ါရှင်တန် - အမေရိကန်၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်ဝါရှင်တန်ရှိလူအင်အားအရင်းအမြစ်များကိုသင်လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ HR ကိုဝါရှင်တန်ရှိအမှုဆောင်ရှာဖွေရေးတွင်အသုံးပြုပါ ဝါရှင်တန်အတွက် အခွက်တဆယ်ဝယ်ယူမှု ဝါရှင်တန်ရှိဝန်ဆောင်မှုများ, စုဆောင်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကို outsourcing ၀ ါရှင်တန်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ် ၀ ါရှင်တန်တွင်အလုပ်ခွင်တွင်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိသည်
၀ ါရှင်တန်ရှိလူ့အရင်းအမြစ်အတိုင်ပင်ခံ (HR) ပေါင်းအခမဲ့ယောဘသည် Portal ကို ဝါရှင်တန်အဘို့အဝင်ရောက်ခွင့်
Talent Acquisition ဝါရှင်တန်ရှိ
Talent Acquisition သည် ၀ ါရှင်တန်ရှိသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အလုံးစုံပြီးပြည့်စုံသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်အဆင့်သုံးဆင့်ပါဝင်သည်။
- စုဆောင်းသည် ဝါရှင်တန်ရှိသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း
- ရွေးချယ်ပါ ဝါရှင်တန်ရှိသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း
- ဘော်ဒါတွင် ဝါရှင်တန်ရှိသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်လျှောက်ထားသူဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက် Talent Acquisition ဝါရှင်တန်ရှိရာထူးများကိုဖြည့်စွက်ရန်မဟုတ်ဘဲဝါရှင်တန်တွင်ဖြစ်စေ၊ သင်၏ ၀ ါရှင်တန်ရှိသင်၏စီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များကိုပြည့်မီစေရန်မည်သူကဝါရှင်တန်မှဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံတကာမှဖြစ်စေ ၀ ါရှင်တန်ကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဗျူဟာမြောက်ဆွဲဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။
စုဆောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် Outsourcing ဝါရှင်တန်ရှိ (RPO)
ကျနော်တို့ပေး စုဆောင်းမှုဖြစ်စဉ်ကိုပြင်ပ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်အောင်မြင်စေရန် ၀ ါရှင်တန်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုကိုရယူပါ။
RPO ပံ့ပိုးပေး ၀ ါရှင်တန်တွင် ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း ၀ န်ထမ်းရှာဖွေခြင်းလုပ်ငန်း ၀ န်ထမ်းသည် ၀ ါရှင်တန်ရှိလုပ်သားအင်အားတိုးချဲ့ခြင်းသည်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုတိုးချဲ့ရန်ဖြစ်သည် HR ဝါရှင်တန်ရှိဘက်စုံငှားရမ်းဖြေရှင်းချက်ပေး။ ၀ ါရှင်တန်ရှိ RPO ပံ့ပိုးသူသည် ၀ ါရှင်တန်ရှိလိုအပ်သော ၀ န်ထမ်းများ၊ ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် ၀ ါရှင်တန်၌သင်တို့၏အောင်မြင်မှုအတွက်လိုအပ်သောနည်းပညာနှင့်နည်းစနစ်များကိုပေးပို့နိုင်သည်။
(ဒီတစ်ခုအဘို့ဖြစ်၏ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ဝါရှင်တန်ရှိအမှန်ပင်ရှာဖွေနေသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ ဝါရှင်တန်မှာ
၀ ါရှင်တန်ရှိအလုပ်အကိုင်၊ ဝါရှင်တန်ရှိအတွေ့အကြုံရှိအလုပ်များ၊ ဝါရှင်တန်ရှိအလုပ်များ၊ ဝါရှင်တန်ရှိအိုင်တီအလုပ်များ၊ ၀ ါရှင်တန်ရှိအလုပ်အကိုင်များ၊ ဝါရှင်တန်ရှိလုံခြုံရေးအလုပ်များ၊ ဝါရှင်တန်ရှိရောင်းအားအလုပ်များ၊ ဝါရှင်တန်ရှိစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအလုပ်များ၊ ၀ ါရှင်တန်တွင်ဝါရှင်တန်ရှိရာသီအလိုက်အလုပ်သမားများ၊ ဝါရှင်တန်ရှိအလုပ်အကိုင်များ၊ ဝါရှင်တန်ရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ၊ ၀ ါရှင်တန်ရှိဝဘ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအလုပ်များ၊ ဝါရှင်တန်ရှိအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုပိတ်ဆို့ခြင်း၊
၀ ါရှင်တန်တွင်အလုပ်ရှာဖွေသည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များရှိသည်။ ၎င်းသည် ၀ ါရှင်တန်တွင်နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနေရာ ၁၀၆ နေရာတွင်အလုပ်ရှာရန်အထောက်အကူပြုသည်
၀ ါရှင်တန်တွင်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်နှင့်သက်ဆိုင်သောလိုအပ်ချက်များကို တွေ့ဆုံ၍ ၀ ါရှင်တန်တွင်သင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်သောအခါ HR အကြံပေးသည်များစွာကူညီနိုင်သည်။
လူ့အင်အားအရင်းအမြစ် အတိုင်ပင်ခံ ဝါရှင်တန်တွင်သင်၏ HR အခြေခံလိုအပ်ချက်များအတွက်အထူးအလုပ်ဖြစ်သော ၀ ါရှင်တန်တွင် HR လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုစုဆောင်းနိုင်သည်။
အမှန်စင်စစ်အလုပ်အကိုင်များ နှင့်ဝါရှင်တန်အတွက်အရေးပါသောသဘာဝဖြစ်ကြောင်းဝါရှင်တန်ရှိနေရာလွတ်, အလျင်အမြန်ငှားရမ်းရန်ကူညီပေးသည်။
- ၀ ါရှင်တန်အတွက်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုအကြံပေးခြင်း
- ၁၀၅ နိုင်ငံနှင့် ၀ ါရှင်တန် - နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံ။
အကောင်းဆုံး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ HR အလေ့အကျင့် ဝါရှင်တန်ရှိနောက်သို့လိုက်ကြ၏။
အတူအတွေ့အကြုံကို စက်မှုလုပ်ငန်းအများအပြား ဝါရှင်တန်ရှိ
ထုတ်လုပ်သူသန်းသန်းပေးသည် အလုပ်အမှုဆောင်ရှာဖွေရေး ၀ ါရှင်တန်ရှိဝါရှင်တန်တွင်စီမံခန့်ခွဲရေး ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှုအတွက် ၀ န်ထမ်းများအားအကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပေးရန်ကတိက ၀ တ်ဖြင့်အမှုဆောင်ရှာဖွေရေးနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည် အလုပ်အမှုဆောင်ရှာဖွေရေး ဝါရှင်တန်နှင့်နိုင်ငံတကာမှဒါရိုက်တာမှ ၀ ါရှင်တန်အတွက်“ C” suite level အထိရှိသည်။ သင်၏ ၀ ါရှင်တန်အားလျှို့ဝှက်အမှုဆောင်ရှာဖွေမှုကိုဝါရှင်တန်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးတန်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကအတွေ့အကြုံများစွာရှိသောစောင့်ကြည့်လိမ့်မည်။
၀ ါရှင်တန်၏ကျွန်ုပ်တို့၏အမှုဆောင်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်သင်၏ကုမ္ပဏီ၏အချိန်နှင့်ငွေကိုသက်သာစေရန်အတွက် ၀ ါရှင်တန်ကို ၀ င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သူများကိုအသေးစိတ်စိစစ်သည်။
တကယ်ပါပဲအကယ်၍ သင်သည် ၀ ါရှင်တန်တွင်စီးပွားရေးစတင်ခဲ့လျှင်၊ ၀ ါရှင်တန်တွင်အောင်မြင်မှုနှင့်တိုးတက်မှုအတွက်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်လိုအပ်သည်ဆိုပါက ၀ ါရှင်တန်ရှိအလုပ်ရှင်များအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအခမဲ့ပေးသည်။
- ၀ ါရှင်တန်တွင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရှာပါ
- ၀ ါရှင်တန်တွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအခမဲ့တင်ပါ
၀ ါရှင်တန်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ HR အတိုင်ပင်ခံ ၀ န်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် ၀ ါရှင်တန်၌ ၀ န်ထမ်းများငှားရမ်းရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားနိုင်သည်။ သို့မှသာဝါရှင်တန်ရှိသင်၏စီးပွားရေးကိုအာရုံစိုက်နိုင်သည်။
၀ ါရှင်တန်တွင်လည်ပတ်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း၊ ၀ ါရှင်တန်တွင်အကြံပေးခြင်း၊ ဝါရှင်တန်ရှိပစ္စည်းထောက်ပံ့ခြင်း၊
သင်လိုအပ်လျှင်ဝါရှင်တန်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဝါရှင်တန်ရှိထူထောင်ထားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည် ဘဏ္licensာရေးလိုင်စင် ဝါရှင်တန်ကနေ အီးယူသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်လိုင်စင် ဘို့ ဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင် ဝါရှင်တန်မှ Crypto ဖလှယ်ခွင့်လိုင်စင် နှင့် ICO သို့မဟုတ် လောင်းကစားလိုင်စင် အမျိုးမျိုးသောတရားစီရင်မှုအတွက်ဝါရှင်တန်ကနေ။
- လုပ်ငန်းလိုင်စင် ဝါရှင်တန်ကနေ
- ကုန်သွယ်ခွင့်လိုင်စင် ဝါရှင်တန်ကနေ
- ဘဏ်လုပ်ငန်းလိုင်စင် ဝါရှင်တန်ကနေ
- Crypto Exchange လိုင်စင် ဝါရှင်တန်ကနေ
- ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေလိုင်စင် ဝါရှင်တန်ကနေ
- လောင်းကစားလိုင်စင် ဝါရှင်တန်ကနေ
- ငွေပေးချေမှုကြားခံ ဝါရှင်တန်ကနေလိုင်စင်
ဝါရှင်တန်ရှိအလုပ်လုပ်မြို့တော် = ဝါရှင်တန်ရှိလက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုများ - ၀ ါရှင်တန်ရှိလက်ရှိတာဝန်ဝတ္တရား
ဝါရှင်တန်ရှိငွေသားစီးဆင်းမှုသည် ၀ ါရှင်တန်ရှိအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အချက်အချာဖြစ်သည်။
ဘို့ လည်ပတ်ငွေကြေး ဝါရှင်တန်ရှိငွေကြေးထောက်ပံ့မှု
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဝယ်ယူ ဝါရှင်တန်ရှိကြွေးရှင်များ၊ ဝါရှင်တန်ရှိအခွန်အကောက်များနှင့် ၀ ါရှင်တန်၏စျေးကွက်အရ ၀ ယ်ယူသည့်စျေးနှုန်းများကို ၀ ါရှင်တန်တွင်လုံ့လဝီရိယရှိရှိလုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ၊ အကြံပြုသည်မဟုတ်။ ဘို့ ဝါရှင်တန်ရှိစီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံ ဝါရှင်တန်ရှိ Due Diligence နှင့်ဆက်စပ်သောသင်လုပ်နိုင်သည်
ပစ္စည်းကိရိယာငွေကြေး ၀ ါရှင်တန်တွင်ဝါရှင်တန်ရှိသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်အတွက် ၀ ါရှင်တန်ရှိပစ္စည်းအသစ်များအတွက် ၁၀၀% ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးသည်
ဝါရှင်တန်ရှိပစ္စည်းငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအတွက် - ပိုသိကြ ဆက်သွယ်ရန်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလှည့်ကျအတိုင်ပင်ခံ ၀ ါရှင်တန်တွင် ၀ ါရှင်တန်ရှိအမြတ်တိုးရန်၊ တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ၀ ါရှင်တန်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအသုံးပြုသည် န်ဆောင်မှုများလှည့် စီးပွားရေးတိုးတက်စေရန်ဝါရှင်တန်ရှိ
ဝါရှင်တန်ရှိ software ကုမ္ပဏီ
၀ ါရှင်တန်မှ ၀ ယ်ယူသူများအားအိုင်တီဝန်ဆောင်မှုများပေးသည် web development ဝါရှင်တန်မှာ eCommerce ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝါရှင်တန်မှာ blockchain ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ ဝါရှင်တန်မှာ software development ဝါရှင်တန်မှာ မိုဘိုင်း app ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လည်းအဖြစ်လူသိများဝါရှင်တန်ရှိ မိုဘိုင်း application ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝါရှင်တန်မှာ ဝဘ်ဒီဇိုင်း ဝါရှင်တန်ရှိဝါရှင်တန်ရှိဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး
ငါတို့သည်လည်းအခမဲ့ပေး: ၀ ါရှင်တန်ရှိဆော့ဖ်ဝဲလ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှု၊ ၀ ါရှင်တန်ရှိ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ၀ ါရှင်တန်ရှိ Blockchain တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှု၊
ဝါရှင်တန်ရှိတတ်နိုင်သော Web Designing Company
ဝါရှင်တန်ရှိဝက်ဘ်ဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီ ၀ ါရှင်တန်ရှိ Client`s အတွက်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ပေးသည်မှာ Corporate, Responsive နှင့် SEO Optimized ဖြစ်သည်
ဝါရှင်တန်ရှိတတ်နိုင်သော Web Development
ဝါရှင်တန်ရှိ Web Development Company နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အရည်အသွေး၏။
ဝါရှင်တန်ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသော App Development
351+ ကျော်သောအက်ပ်များ နိုင်ငံတကာဖောက်သည်များအတွက်။ ဝါရှင်တန်ရှိ App Development ကုမ္ပဏီ.
ဝါရှင်တန်ရှိသင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ထုတ်ကုန်များ - ၀ ါရှင်တန်တွင်သာမကနိုင်ငံတကာ၌သင်၏အွန်လိုင်းတိုးတက်မှုနှင့် ဦး ဆောင်မှုမျိုးဆက်အတွက်။
၀ ါရှင်တန်ရှိတတ်နိုင်သည့် Software Development
၀ ါရှင်တန်ရှိဆော့ဝဲလ်ကုမ္ပဏီ ဖွံ့ဖြိုးမှု, စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် devOps များအတွက်တိုင်ပင်။
စိတ်ကြိုက် ဝါရှင်တန်ရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီ, မသက်ဆိုင်ဘဲမူလသင့်ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်း။
ဝါရှင်တန်ရှိအိမ်ခြံမြေ ၀ န်ဆောင်မှုများ
၀ ါရှင်တန်ရှိအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းနှင့် ၀ ါရှင်တန်ရှိအခမဲ့အိမ်ခြံမြေ ၀ န်ဆောင်မှု
၀ ါရှင်တန်တွင်စီးပွားရေးစတင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဝါရှင်တန်ရှိသင်၏စီးပွားရေးကိုတိုးချဲ့ခြင်း၊ ၀ ါရှင်တန်တွင်ရုံးခန်းသို့မဟုတ်အိမ်တစ်လုံးငှားရန်ဝါရှင်တန်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဝါရှင်တန်အိမ်ခြံမြေလိုအပ်ချက်များအတွက်အခမဲ့ပေါ်တယ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဝါရှင်တန်ရှိအိမ်ခြံမြေပိုင်ရှင်များနှင့်ဝါရှင်တန်ရှိအိမ်ခြံမြေပွဲစားများနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
ဝါရှင်တန်ရှိအိမ်ခြံမြေတစ်ခုကိုဝယ်ယူရောင်းချခြင်း။ ငါတို့ကြိုးစားကြည့်ပါ အခမဲ့အိမ်ခြံမြေပေါ်တယ် ဝါရှင်တန်ရှိ ၀ ါရှင်တန်တွင်ရောင်းရန်တိုက်ခန်း
၀ ါရှင်တန်မှာတိုက်ခန်းတစ်ခန်းငှားချင်တယ်။ အခမဲ့အိမ်ခြံမြေပေါ်တယ် ဝါရှင်တန်ရှိ ဝါရှင်တန်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိငှားရန်ရှိသောတိုက်ခန်းကိုရှာဖွေပါ။
၀ ါရှင်တန်တွင်စီးပွားရေးအသစ်စတင်ရန်ဝါရှင်တန်တွင်ရုံးခန်းလိုအပ်သည်။ ၀ ါရှင်တန်တွင်ရုံးခန်းရှာရန် ၀ ါရှင်တန်ရှိရုံးပိုင်ရှင်များနှင့်အခမဲ့ဆက်သွယ်ပါ။
ဝါရှင်တန်ရှိစိုက်ပျိုးရေးမြေများကိုရှာဖွေခြင်း၊ နောက်ထပ်မရှာပါနှင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ါရှင်တန်၏အခမဲ့အိမ်ခြံမြေစာရင်းများကိုသုံးပါ။
၀ ါရှင်တန်သည်ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ သို့သော် ၀ ါရှင်တန်တွင်သင်လိုချင်သောအရာကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲနိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဝါရှင်တန်ယူအက်စ်အမေရိကန်အတွက်သုံးပါ။ သင်လိုချင်တာအားလုံး၊ လိုချင်တာ!
ဝါရှင်တန်ရှိ Classified န်ဆောင်မှုများ
ဝါရှင်တန်များအတွက် Classified Portal ကို
၀ ါရှင်တန်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါသို့မဟုတ် ၀ ါရှင်တန်တွင်သင်၏စီးပွားရေးကိုတိုးချဲ့ပါ။ ဝါရှင်တန်ရှိရုံးပရိဘောဂများ၊ ဝါရှင်တန်ရှိလက်ပ်တော့များ၊ ဝါရှင်တန်ရှိသင်၏တိုက်ခန်းအတွက်ပရိဘောဂများလိုအပ်နိုင်သည်။ ဝါရှင်တန်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌သေးငယ်သောအရာများစွာရှိသည်။ အမေရိကန်နှင့် 105 နိုင်ငံများအဘို့အခမဲ့ကြော်ငြာပေါ်တယ်။
ဝါရှင်တန်အတွက်အခမဲ့ Classified န်ဆောင်မှုများ
သင်၏စီးပွားရေးအသစ်အတွက် ၀ ါရှင်တန်တွင် ၀ ယ်ရန်အိုင်တီပစ္စည်းကိရိယာများကိုရှာဖွေခြင်း။
သင်၏စီးပွားရေးအတွက်ဝါရှင်တန်ရှိကားတစ်စီးလိုအပ်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဝါရှင်တန်ရှိဒေသခံကားရောင်းသူနှင့်တွေ့ဆုံပါ။
၀ ါရှင်တန်ရှိအိမ်သုံးစက်ပစ္စည်းများကို ၀ ါရှင်တန်ရှိကော်ဖီထုတ်လုပ်သူများ၊ မိုက်ကရိုဝေ့ဗ် Owen စသည်ဖြင့်ရှာဖွေပါ။
အမေရိကန်ရှိလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှု
ဥပဒေရေးရာအတွက်ဝါရှင်တန်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေကိုဆက်သွယ်ပါ ယူအက်စ်တွင်နေထိုင်ခွင့် .
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - ၀ ါရှင်တန်ရှိ Virtual Office
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမည်များဖြစ်သော Virtual Office Address Washington, United States ရှိစာတိုက်မေးလ်များနှင့်အထုပ်များကိုကျွန်ုပ်ရရှိနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့သင်လုပ်နိုင်သည်။ - သင်၏အကောင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်ပြီးသည်နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်၊ Virtual ရုံးအကောင့်အကောင့်အကောင့်ပြီးသောချိန်ညှိချက်များတွင်သင်၏အမည်နှင့်စီးပွားရေးအမည်နှစ်ခုလုံးကိုဖော်ပြနိုင်သည်။ သို့မှသာစာနှစ်စောင်စလုံးမှအမည်များအောက်တွင်စာတိုက်နှင့်စာတိုက်များကိုသင်ရရှိနိုင်သည်။ Virtual Office Address Washington ။
Virtual office Washington | Virtual Office US
၀ ါရှင်တန်၏ Virtual Office လိပ်စာသည်ကမ်းခြေရှိစာတိုက်ပုံးတစ်ခုလား။
ဖော်ပြခဲ့သောတည်နေရာအတွက်ဝါရှင်တန်ရှိ Virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုသည် ၀ ါရှင်တန်ရှိပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့မှစီမံခန့်ခွဲထားသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်နေရာဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဝါရှင်တန်ရှိဝါရှင်တန်ရှိရုံးခန်းနေရာ၌သင်၏ဆက်သွယ်မှုနှင့်အထုပ်များကိုလက်ခံခြင်းနှင့်စီစဉ်ခြင်း
ဝါရှင်တန်ရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ US ရှိ Virtual ရုံးလိပ်စာ
ဝါရှင်တန်ရှိ virtual office လိပ်စာများကိုလက်ခံရရှိထားသောစာတိုက်နှင့်စာတိုက်ပုံးများကိုလိပ်စာများစွာသို့ပေးပို့နိုင်ပါသလား။
ဝါရှင်တန်ရှိ Virtual Address US ရှိ Virtual Address
ကျွန်ုပ်၏ဝါရှင်တန် Virtual Office လိပ်စာသို့ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်၏စာပို့လျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း။
သင်၏စာသို့မဟုတ်အထုပ်ဖြစ်စေ ၀ ါရှင်တန်ရှိ virtual စီးပွားရေးလိပ်စာသို့ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ ၎င်းတို့သည်ဒီဂျစ်တယ်ပြောင်းခြင်းနှင့်ဝါရှင်တန်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက် virtual mailbox မှတစ်ဆင့်သင့်အားအသိပေးခြင်းခံရပြီးနောက်သင်ရွေးချယ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားဖွင့်ရန်၊ စကင်လုပ်ရန်၊ ဖယ်လိုက်ပါ။
ဝါရှင်တန်ရှိ Virtual Business Address | US ရှိ Virtual Business Address
ဝါရှင်တန်ရှိ Virtual Business လိပ်စာသည်အမေရိကန်၌ရှိနေလိုသောမည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမဆိုသွားရန်ကောင်းသည်။ သင်၏တည်ရှိမှုအတွက် ၀ ါရှင်တန်တွင်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ရန်အတွက်အချိန်နှင့်ငွေအမြောက်အများကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်မလိုဘဲ ၀ ါရှင်တန်တွင်သင်၏စီးပွားရေးကိုတိုးချဲ့ရန်သင့်ဆန္ဒအပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ဝါရှင်တန်ရှိ virtual ရုံးခန်း US ရှိ virtual ရုံးခန်း
၀ ါရှင်တန်ရှိ virtual PO box အတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက် ၀ န်ဆောင်ခများ၊
US တွင် virtual mailing address သို့မဟုတ် US ရှိ virtual PO box သို့မဟုတ် US ရှိ virtual office Workspace ကိုနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ US ဟုခေါ်သော ၀ န်ဆောင်မှုအပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ပွင့်လင်းမြင်သာသောမူဝါဒနှင့်လစဉ်ကြေးရှိသည်။ စံအထုပ်၏အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်သောအပိုဝန်ဆောင်မှုများကိုမရွေးချယ်မီအခြေအနေနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုအမြဲတမ်းအသိပေးပါ။
ဝါရှင်တန်အတွက် Virtual Office Workspace | ဝါရှင်တန်အတွက် virtual စာပို့လိပ်စာ | ဝါရှင်တန်အတွက် Virtual PO box
US ရှိ virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အခြားအမည်များကဘာတွေလဲ။
အမေရိကန်ရှိ virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်လူတို့နှင့်ဆက်စပ်သောအခြားအမည်များမှာအမေရိကန်ရှိ virtual ရုံးများနှင့်စီးပွားရေးလိပ်စာများ၊ အမေရိကန်ရှိ virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အမေရိကန်ရှိ digital workspace solutions, US ရှိ virtual office လိပ်စာ၊ US ရှိ virtual office ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ယူအက်စ်မှ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အမေရိကန်ရှိ virtual လိပ်စာ ၀ န်ဆောင်မှု၊ အမေရိကန်ရှိ virtual ရုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများ၊ အမေရိကန်ရှိဒစ်ဂျစ်တယ်လုပ်ငန်းခွင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ၀ ါရှင်တန်ရှိ virtual ရုံးကုမ္ပဏီ၊ US ရှိငှားရမ်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ၀ ါရှင်တန်တွင်စာပို့ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ အမေရိကန်ရှိ virtual mailbox ၀ န်ဆောင်မှု၊ အမေရိကန်ရှိ virtual po box ၀ န်ဆောင်မှု၊ အမေရိကန်ရှိ virtual ရုံးခန်းငှားရမ်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဝါရှင်တန်ရှိစာတိုက်လိပ်စာများ။
၀ ါရှင်တန်၏ virtual ရုံးနှင့်အခြားနိုင်ငံများကိုမှတ်ပုံတင်ရုံးလိပ်စာအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
အမေရိကန်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံတိုင်းသည် ၀ ါရှင်တန်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့်အခြားတိုင်းပြည်များတွင်မှတ်ပုံတင်ရုံးလိပ်စာအဖြစ် virtual office အသုံးပြုရန်တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းများရှိသည်။ ရှင်းလင်းချက်အတွက်ထိတွေ့ရယူပါ။
ဝါရှင်တန်ရှိ Virtual စာတိုက်လိပ်စာ ဝါရှင်တန်ရှိ Virtual Office Mailing Address ဝါရှင်တန်ရှိစာပို့ခြင်း ဝါရှင်တန်ရှိမှတ်ပုံတင်ရုံးလိပ်စာ
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ ဝါရှင်တန်အဘို့
ဝါရှင်တန်ရှိ Startups များအတွက်အထူးပံ့ပိုးမှု
အကယ်၍ သင်သည် ၀ ါရှင်တန်တွင်အစပြုသည်ဆိုလျှင်ဝါရှင်တန်ရှိနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးအတိုင်ပင်ခံများနှင့်နိုင်ငံတကာမှအထူးအထောက်အပံ့များကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးသည်။
ဝါရှင်တန်ရှိ One Stop Shop
ဝါရှင်တန်ရှိ Client Acquisition Support
ကျွန်ုပ်သည် Washington Business သတင်းကို millionmakers.com နှင့်စာရင်းသွင်းသင့်သလား။
ဘို့ နောက်ဆုံးပေါ်ဝါရှင်တန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသတင်း ဝါရှင်တန်, ဝါရှင်တန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဥပဒေများစတင်ဘို့ စီးပွားရေးသတင်း, စီးပွားရေးသတင်းဝါရှင်တန်, နောက်ဆုံးပေါ်ဝါရှင်တန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသတင်း ဝါရှင်တန်၊ ဝါရှင်တန်တွင်စီးပွားရေးစတင်ရန် စီးပွားရေးဥပဒေ, ဝါရှင်တန် စီးပွားရေးဥပဒေများ, စီးပွားရေးဥပဒေ ဝါရှင်တန် စီးပွားရေးဥပဒေများ ဝါရှင်တန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိတ်ကူးများ ဝါရှင်တန် စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်အသစ်များ ဝါရှင်တန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိတ်ကူး ဝါရှင်တန်၊ စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်အသစ်ဝါရှင်တန်၊ ဝါရှင်တန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိတ်ကူးများ, ဝါရှင်တန် နောက်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပဒေများ, နောက်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပဒေများ ဝါရှင်တန်၊ ဝါရှင်တန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဥပဒေသစ်များ နောက်ဆုံးသတင်းများ, ဝါရှင်တန်၏နောက်ဆုံးစီးပွားရေးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းအသစ်များ, ဝါရှင်တန်နောက်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစည်းမျဉ်းများ, နောက်ဆုံးပေါ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝါရှင်တန်အုပ်ချုပ်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်ဝါရှင်တန်အုပ်ချုပ်အသစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစည်းမျဉ်း Washington, ဝါရှင်တန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းပုံ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်ဝါရှင်တန်အုပ်ချုပ်, စီးပွားရေးဆောင်းပါးဝါရှင်တန်, ဝါရှင်တန် စီးပွားရေးဆောင်းပါးစီးပွားရေးအတွေးအခေါ်ဝါရှင်တန်၊ စတင်တည်ထောင်သည် ဝါရှင်တန် စီးပွားရေးအတွေးအခေါ်သစ် ဝါရှင်တန်, ဝါရှင်တန် စီးပွားရေးသတင်း, စီးပွားရေးသတင်း ဝါရှင်တန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်းပါးများ ဝါရှင်တန်၊ ဝါရှင်တန်စီးပွားရေးဆောင်းပါးများ၊ ဝါရှင်တန်စီးပွားရေးသတင်းများ၊ ဝါရှင်တန် စီးပွားရေးဆိုင်ရာမွမ်းမံမှုများ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝါရှင်တန်ကို update လုပ်, ဝါရှင်တန် စတင်တည်ထောင်သည်၀ ါရှင်တန်သတင်းမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဘယ်လိုစမလဲ၊ ၀ ါရှင်တန်သတင်းမှာစီးပွားရေးကိုစတင်တယ်။ စတင်ရန်အကောင်းဆုံးစီးပွားရေး ဝါရှင်တန် update ကို, စီးပွားရေးအစီအစဉ် ဝါရှင်တန်သတင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်း ဝါရှင်တန်အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းများ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခွင့်အလမ်း ဝါရှင်တန်တွင် အသေးစားစီးပွားရေး ဝါရှင်တန်၊ ဝါရှင်တန်အသေးစားစီးပွားရေး၊ စီးပွားရေးသတင်း ဝါရှင်တန် စီးပွားရေးဝဘ်ဆိုက် ဝါရှင်တန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဝါရှင်တန်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဝါရှင်တန်၊ ဝါရှင်တန်စီးပွားရေး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဝါရှင်တန်, ဝါရှင်တန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ။